Shir Madaxeed ayaa Midowga Africa manta ka furmey Magaalada Adis Ababa ee Dalka itoobiya.
Madaxweynayaasha Ururka midowga Afrika oo kullan Xasaasi ah loogana hadlayo arrimaha wadanka Soomaaliya uga furmaya saakay ...
Date: 2011-01-30 06:30:02
Madaxweynayaasha Ururka midowga Afrika oo kullan Xasaasi ah loogana hadlayo arrimaha wadanka Soomaaliya uga furmaya saakay Magaalada Addis Ababa.
Waraka ka soo baxayay caasimadda dalka itoobiya ee addis ababa ayaa sheegay in maanta lagu wado in kullan xasaasi ah ay ku yeeshaan madaxweyneyaasha Ururka Midowga Africa.
Kullamadan ay ku qaadanayaan madaxweyne yaashani ayaa looga hadlayaa arimaha soomaaliya, sudaan, iyo wadamo kale oo aan la shaacinin ayadoo dalka soomaaliyana Shirkaasi uga qeybgali doono madaxweynaha dowladda KMG soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrca Mr. jean ben ayaa sheegay in xooga lagu saari doonno kullaankani ka dhici doono caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa xaalada cakiran ee Dalka soomaaliya sida uu u sheegay wakaaladaha wararka ee Caalamka qaarkood.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la filayayaa in uu ka duwanaaado shirkani shirarkii sida caadiga ah loogu wqaban jirey halkaasi maadaama ay jirto codsiyo uu Ururka Midowga Africa uu codsanayo kuwaasi oo ku aadan in la bedelo shaqada AMISOM loona bedelo naba dhaliyayaal iyo in ciidamada la kordhiyo.